Mametraka fitarainana ny Istinomer , sampandraharaha Serba iray misahana ny fanamarinana haingana ny zava-mitsy taorian’ny fanafihana informatika mahery vaika. · Global Voices teny Malagasy
Fanafihana faharoa nozakain'ny Istinomer tao anatin'ny andro vitsivitsy
Voadika ny 20 Janoary 2020 7:22 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Shqip, Español, English
Pikantsarin'ny pejy voalohany ao amin'ny Istinomer (Truth-O-Meter) tamin'ny 18 Desambra 2019. Fampiasana am-pahamendrehana.
Tany am-boalohany ity lahatsoratra ity dia nivoaka tao amion'ny Istinomer (Truth-O-Meter), hetsika iray fanamarinana ny zavamisy, an'ny Ivontoerana ho an'ny Fikarohana, Fangaraharàna ary Fandraisana Andraikitra (CRTA). Avoaka etsy ambany ao anatin'ny fifanarahana fizarana votoaty ny dika novaina.
Fampahalalambaovao Serba mifantoka amin'ny fanamarinana ireo fanambarana ataon'ny mpiasampanjakana sy mpanao politika, ary koa ireo fanadihadiana ireo olana goavana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny Istinomer (Truth-O-Meter). Nankalaza ny faha-10 taonany tamin'ny 10 Desambra 2019 izy.
Napetraky ny vaomieran'ny fanontàna lahatsoratra an'ilay haino aman-jery miorina any Belgrade tamin'ny 17 Desambra 2019 teny amin'ny departemantan'ny fanaovana helokabevava amin'ny Aterineto ao amin'ny Ministeran'ny Atitany Serba ny fitarainana ara-pitsarana hanenjehana ireo mpanoratra tsy fantatra, tamin'ny nitaterany fisianà fanafihana DDoS goavana natao tamin'ny tranonkalany tamin'ny 16 Desambra 2019 izay nibahana ny fandehanany.
Fikasàna ratsy ny hanakorontana ny fiasa ara-dalàn'ny mpampiantrano iray, na ny tolotra na ny tambajotra voakendry amin'ny fanotorana ilay lasibatra amin'ny andianà fijirihana Aterineto no atao hoe fanafihana DDoS na fandàvana tolotra totoafo aparitaka.
Nanomboka minitra vitsy taorian'ny 16.00 (ora any an-toerana (CET)) ilay fanafihana, izay niteraka ny fikatsoan'ny tranonkala Istinomer. Nahazo fangatahana 30.500.000 isanora avy aminà Adiresy IP toa avy any Brezila, Indonezia, Tailandy, Rosia, Inde sy toerana maro hafa ilay tranonkala.
Fanafihana faharoa nanjo ny Istinomer io tao anatin'ny andro vitsivitsy. Andro vitsivitsy talohan'izay, vao talohan'ny fankalazana ny faha-10 taonan'ilay fampahalalambaovao, tratran'ny fanafihana amin'ny Aterineto izay nanakorontana ny fitsapankevitra natany tey anaty aterineto, nitondra ny lohateny hoe “Lainga tanatin'izay Folo taona izay” ny tranonkalan'ilay tolotra fanamarinana ny zavamisy.
Nasain'ilay fitsapankevitra ireo mpamaky mba hifidy hoe iza tamin'ireo fanambaràna nataon'ny mpanao politika nandritra izay folo taona izay no lainga tena nanintona ny olona be indrindra. Andro iray talohan'ny nanakatonana ilay fifidianana, nitarika fanampiana vato tsy marina niisa 350.000 tamin'ireo vato 10.000 tena izy avy amin'ireo mpampiasa nandritra ilay fotoana fifidianana ilay fanafihana.
Tao anaty fanambarana iray ho an'ny daholobe, nanambara ny ekipan'i Istinomer fa nanaparitaka lainga avy tamin'ireo mpikambana amin'ny antoko mpanohitra ankehitriny ho eny an-tampon'ny lisitra ireo vato tsy marina ary nanakisaka ireo fanambaràn'ireo mpanao politika eo amin'ny firondràna amin'izao fotoana izao ho any ambany indrindra. Tsy afaka ny hanome antoka ny fahamarinan'ilay fifidianana, nanakatona ilay fifidianana ary niala tsiny nanoloana ireo mpamaky ny ekipan'ny Istinomer:
Manaiky izahay fa tsy nahomby ilay hevitray. Tsy nanome fiarovana ampy izahay. Na raha lazaina amin'ny fomba hafa, tsy nieritreritra mialoha ny hamafin'ny fanarahamaso ataon'ireo rafitra sasany ato anatin'ity fiarahamonina ity izahay. Mazava ho azy, ho voabango[n'ireo manampahefana eo amin'ny fitondrana] tsara ireo vokatra rehetra havoaka imasom-bahoaka.
Miala tsiny aminareo izahay, ry mpamaky hajaina, indrindra ireo nandray anjara tamin'ny fanadihadiana nataonay. Na dia tsy hampiseho amin'ny fomba ofisialy ny Lainga tamin'izay Folo Taona izay aza izahay dia mihevitra fa ianareo sy izahay dia afaka mahita mazava tsara hoe iza no mpandainga sy fositra lehibe indrindra.
Nandritra ireo folo taona nisiany, tsy mbola tratran'ny fijirihana lehibe toy izany mihitsy ny Istinomer.
Tamin'ny fitaterana ilay fanafihana tany amin'ny polisy, nomarihan'ny vaomieran'ny fanontàna ao amin'ny Istinomer ny fahavononany hiara-hiasa amin'ireo manampahefana. Namoaka fangatahana hanaovana fanadihadiana iray hamoahana ny mombamomba ireo nibaiko ilay fanafihana sy namatsy vola ny teknolojia nanaovana izany izy.
Ilay fanafihana natao tamin'ny Istomer dia ohatra mivandravandra be amin'ny ezaka hanemporana ny fahafahan'ireo haino aman-jery sy hanaisorana ireo haino aman-jery voalohany mpanamarina ireo zava-misy ao amin'ny faritra mba hanomezana vaovao ny vahoaka momba ireo mpanaparitaka lainga, manararaotra ny zava-misy sy manao fampanantenana tsy voahevitra.
Miala tsiny be dia be izahay manoloana anareo mpamaky ny Istinomer nohon'ny fihisaran'ny tolotra sy fahataràna mikasika ny votoatinay. Hotohizan'ny Istinomer ny asa fanamarinana ny zava-misy sy famoahana ireo lainga any anatin'ny fanambaràn'ireo mpanao politika sy ireo mpandray anjara hafa amin'ny kabary ho an'ny vahoaka .
24 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana